Maxaa ka socda degmooyinka Dhuusamareeb,Guriceel & Matabaan!.
Waxaa Xaalad Daganaashaa laga soo tabinayaa degmooyinka Dhuusamareeb,Guriceel iyo Matabaan oo saacadihii la soo dhaafay ay ka taagneed Xiisad u dhexaysa Ciidamo taabacsan Madaxa Xukumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Ciidanka qaybta 21 aad ee Ciidanka Xoogga dalka.
Degmooyinkaasi ayaa waxaa si buuxda Caganta ugu haaya Ciidanka Dowlada Faderaalka Soomaaliya,oo dhamaan la wareegay Xarumihii ay baneeyeen Ciidanka Ahlusunna iyo Maamuladii degmooyinka Dhuusamareeb,Matabaan iyo Guriceel oo sanadihii la soo dhaafay ay maamulayaan Ahlusunna Wajamaaca.
Ciidamada Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ee Dhuusamareeb ayaa la wareegay Xarunta degmada ka dib markii Ciidamo ka tirsan Ahlusunna ay si iskood isaga baxeen xarunta, waxa ayna galeen Xarunta ay Dhuusamareeb ka daganyihii Macalin Maxamuud ,Sheekh Shaakir iyo Sheekh Cabdirisaaq Ashcari oo ah Hoggaanka ugu Sareeya Maamulka Ahlusunna.
Wararka ayaa intaa ku daraya in dhammaan ciidankii Ahlusuna ay isugu uruureen xarunta INJI oo uu degan yahay Madaxa Xukumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir iyo qaar ka mid ah Golohiisa wasiirada.
Gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdule oo shir jaraa’id ku qabtay hoyga uu Dhuusamareeb ka daganyahey ayaa sheegey in uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo Dowlada Faderaalka Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in uusan aqbaleyn in ay xabad ka dhacdo Magaalda Dhuusamareeb,waxaa kale oo uu been abuur ku tilmaamay warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegaya in magaalada cakirantahay.
Guddoomiye Nuur ayaa sheegay in amaanka Magaalada Dhuusamareeb ay sugayaan Ciidamada isku dhafka ah dowladda Federaalkana mas’uul ka tahay amaanka Magaalada Dhuusamareeb.
Waxaa uu Shacabka Magaalada Dhuusamareeb ka codsaday in ay la shaqeeyaan hay’adaha amaanka kana qeybqaataan ka hortagga cadowga oo uu sheegay in ay yihiin Al-shabaab.
Sidoo kale wararka ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in hoggaanka Ahlusunna ay dowlada Soomaaliya ka dalbadeen in ay ka wada hadlaan Xalaada Siyaasadeed ee Galmudug iyo Xaalada Colaadeed ee ku soo korartay Deeganada.
Waxaana Masuuliyiin ka tirsan Wasaarada arimaha Gudaha Soomaaliya ay saxafadda maxaliga ah u sheegeen in maalinta Bari ah ay Dhuusamareeb tagi Doonaan Wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ay ka midyihiin Wasiirka amniga Gudaha iyo Xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Dhanka Degmada Guriceel Taliyaha qaybta 21 aad ee ciidanka Xoogga dalka Generaal Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje iyo Taliyaha Guutada 15-aad Gen Mascuud Maxamed Warsame oo horay u ahaa taliyihii Ciidanka Ahlusunna ayaa tagay saldhiga booliska degmada Guriceel waxa ayna ku wareejiyeen Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya.
Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ee lagu wareegay Saldhhigga degmada Guriceel ee gobalka Galgaduud, ayaa saraakiisha Ciidanka Xoogga dalku ku amreen in ay sugaan Amaanka Xarunta degmada sidoo kana ay shacabka u adeegaan, maadaaba ay Xalay Xarunta degmada baneeyeen Ciidankii Ahlusunna.
Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan oo ay Shalay la wareegeen Ciidanka Dowlada Soomaaliya ayaa maanta degan waxaana si buuxda gacanta ugu haaya Ciidanka Dowlada Soomaaliya,waxaana saraakiil ka tirsan Ahlusunna ay u sheegeen saxfadda maxaliga ee ka hawlgasha gobalka in dowlada Soomaaliya ay qorshaynayso,in degmadaasi ay ku wareejiyaan Maamulka Hirshabeele oo ay Gobol ahaan hoos tagto.
Wasiirka arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo la hadlayay shacabka magaalada Guriceel ayaa sheegay in sida ay haatan wax u wadaan Ahlusuna aanay ka turjumeyn arrimihii masiiriga ahaa ee go’aanka laga gaaray.
Xildhinaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid aha Xildhinaada laga soo doorta Galmudug ayaa Dowlada Soomaaliya ku eedeeyay in ay dano gaar ah oo ay ka leedahay Galmudug ay Dhiig u daadinayso, waxa uuna u soo jeediyay in aysan Xoog wax ku raadin.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale Ahlusunna ugu baaqay in ay u tanaasulaan Shacabka Galmudug oo uu sheegay in ay doonayaan Nidaamka Dowlada.
“Ahlu Sunna waliba si gaar Macalin Maxamuud iyo Sheekh Maxamed Shaakir waxaan leeyahay siyaasadu maanta kaliya maahan, dadka iyo deegaankana wax badan ayaad soo tarteen dadkuna maanta dowladnimo ayay u hanqal taagayaan sax iyo qalad waxay rabaan ha aaminsanaadeen ee adinku maanta u tanaasula una ogolaada dowladnimada ay hayaanka u yihiin, si beri hadii wax qaldamaan odoyaal marjac ah oo loo soo laabto aad u noqotaan” ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad.
Saacadihii ugu danbeeyay ciidamada dowladda ayaa u muuqda kuwo isku ballaarinaya guud ahaanba maamulka iyo gacan ku heynta deegaannadda ay gobolka ka maamulaan Ahlu Sunna Waljameeca, waxa haatan Gacanta u galay degmooyinka Dhuusamareeb,Guriceel iyo Matabaan oo kala tirsan Gobolada Galgaduud iyo Hiiraan.